Tajikistan: Fipoahana Tao Dushanbe – Fiokoana Sa Tsia? · Global Voices teny Malagasy
Tajikistan: Fipoahana Tao Dushanbe – Fiokoana Sa Tsia?
Voadika ny 24 Avrily 2018 12:30 GMT
Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2007)
Tamin'ny herinandro lasa, nampitahotra ny mponina manontolo tao Tajikistan ny fipoahana baomba, nahafaty olona iray. Araka ny tatitr'i Josh Foust tao amin'ny Registan, vao maraimbe – manodidina ny tamin'ny 8 ora teo, ora ao Dushanbe, mpamafa làlana mahantra iray no nandraoka harona plastika izay, izay nipoaka teny an-tanany. Nitranga teo akaikin'ny tranom-panjakana “Kohi Vahdat” io, tsy lavitra akory ny Lapam-panjakana. Toerana iray manana ny lazany mikasika ny fandraisana ireo fivoriambe ny “Kohi Vahdat”, anisan'izany ireo fivoriambe iraisam-pirenena. Akaikin'izy io koa ny masoivoho Ozbeky, ny Banky Voalohany Fampisamboram-bola ara-barotra, ny Hotely Avesto manan-kaja ary ireo tranobe sasantsasany malaza, saingy nifantoka tanteraka tamin'ny Lapampanjakana ny mason'ny vahoaka.
Toy ny mahazatra, heverina ho tsy nisy nifandraisany tamin'ilay baomba nipoaka ilay olona matin'ny fipoahana. Raha ora iray taoriana no nitranga teo, mety ho avo be ny isan'ireo niharam-boina, nahitana ireo mpandray anjara tamin'ny Fihaonan'ny Faritra Ho Fampihenana ireo Loza Ara-Tontolo Iainana ao Azia Afovoany, nokarakarain'ny Kaomisiona Eoropeana. Nafindra tany amin'ny toerana hafa ny hetsika, saingy nony tolakandro, ireo mpandray anjara – misolo tena ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ireo mpiasam-panjakana ambony – dia niverina tao “Kohi Vahdat” taorian'ny nanaovan'ny mpitandro ny filaminana ny fitsirihana ny toerana. Manombatombana ny sasantsasany tamin'ireo manampahaizana fa angamba ho an'ireo tomponandraiki-panjakana no nanaovana ilay baomba ary, mety ho ny praiminisitra Okil Okilov mihitsy aza.
Ny ankamaroan'ireo masoivohom-baovao no nitatitra fa “tany amin'ny manodidina akaiky ny lapam-panjakana” no nitranga io fipoahana io, tsy nanonona ny tena toerana marina, nanome hevitra mba hilazàna fa nomanina ho an'olona iray manokana ilay baomba. Nanao fandikana ny lahatsoratr'i Rama avy amin'ny neweurasia i Ian avy amin'ny Beyond the River:
Tanàna azo lazaina ho mandry fahalemana i Dushanbe… Iza no mikatsaka hanakorontana ny zava-misy ao amin'ny firenena? Ireo silamo, izay tratry ny tsindry hazolena ve? Ny mpanohitra, izay tsy dia misy loatra? Tsy mihevitra izany aho. Tsy misy amin'izy ireo mety hanao dingana iray kidaladala tahaka izany. Angamba mety ho lalao politika io – tetika iray hifehezana ny tsy fahafalian'ny vahoaka? Tena mety ho izay. Miaina fiakaran'ny vidin'ireo sakafo tsy hay tohaina sy tahan'ny fisondrotry ny fiainana (12,4%) tsy mbola nisy toa azy ny ao Tadjikistan ankehitriny. Izay no antony ilàna hanodina ny sain'ny mponina sy ny fampahalalam-baovao tsy ho amin'ireo tena olana misy tamin'ny alàlan'ny fikarakaràna ilay lazaina fa “fanafihana mpampihorohoro”.
Taoriana kelin'izay, navaozin'i Ian ny lahatsorany tamin'ny alalan'ny fanampiana rohy iray mankamin'ny lahatsoratry ny Eurasianet sy tamin'ny fandraisana fitanisàna iray.
“Any authoritarian ruler needs an external threat. It’s always nice when there is an insidious enemy.”
–Alexei Malashenko, Carnegie Center Moscow
“Mila fandrahonana avy any ivelany ny mpanao didy jadona rehetra. Tsara foana io rehefa misy fahavalo mandoza.”
–Alexei Malashenko, Foibe Carnegie Maosko
Ny andro manaraka taorian'ny fipoahana, nanoratra lahatsoratra hafa aho mikasika ny fipoahana iray hafa mitaotao, izay taty aoriana dia hita fa toa fanazarantena. Te-hanandrana hitsapa ny fahatsiarovantenan'ny mponina amin'ny resaka fiarovana ireo mpitandro filaminana. Vokatr'io, milaza i Ataman Rakin fa ny baomba nipoaka tao Dushnbe dia tsy inona fa….
…sarimihetsika ‘Andao isika-hampitahotra-ireo vahiny-adaladala-noho izany-azontsika-amidy-ny olana-fampihorohoroana-antsika’.
Mitovy amin'ny an'ireo izay nanandrana nametraka ny famonoana an'i Saipov ho andraikitry ny Hizb-ut-Tahrir tsy ela akory izay. Lasibatra iray malefaka ny fivoriambe EU, mifanohitra amin'ireo fotodrafitrasa amerikana izay tena tsara aro tanteraka. Namana iray tao amin'ilay toerana taoriana kely monja ilay lazaina fa “terakt” [fanafihana mpampihorohoro] no nilaza ho tsy nahita na faty na rà teo amin'ny tany.
Ampifandrohizin'i Nikita Smekaev avy amin'ny Blaogy Moskovskiy Komsomolets, mankany amin'ny iray amin'ireo tranonkala Rosiana, izay nanaovan'i Alexei Vlasov, Filoha Lefitry ny Departemanta ara-Tantara ao amin'ny Oniversitem-panjakàna ao Maosko, nilaza hoe:
“Mampiseho fehezana iray misy fifanoherana ilay fipoahana: herinandro lasa izay, voalaza fa narary ny filoham-pirenena Emomali Rahmon, toy ny hoe efa herinandro maromaro izay izy no notsaboina tany amin'ny hopitaly iray tany amin'ny firenena Tandrefana. Io fipoahana io dia mety ho napetraka nifanindran-dàlana tamin'ilay fikasàna hamono ny Minisitry ny fiarovana. Ny fipoahana, nofaritana ho toy ny fanafihana mpampihorohoro, dia mety ho vokatra iray avy amin'ny fisarahana anaty iray tao anatin'ny tarik'i Rahmon momba ny olan'ny fandimbiasana toerana azy”.
Mpanoratra iray avy ao amin'ny Coffee miaraka amin'i Mark Towhey no mieritreritra fa mitranga imbetsaka matetika ao Londona io karazana fipoahana io, noho ny ao Dushanbe:
“Ny zava-misy dia tena zavatra tsy mahazatra ho an'i Dushanbe io karazana fipoahana io. Tsy sangisangy, matetika mitranga imbetsaka any Londona io noho ny eto. Izay tena mahatalanjona mikasika io baomba io, sy ireo hafa vitsivitsy nitranga nandritra ireo taona maro lasa (araka ny voalazan'ireo mpiaramiasa tamiko) dia hoe, na haingana be aza ny governemanta niampanga azy ireo ho nataon'ny “silamo mpampihorohoro”, tsy nisy vondrona na iray aza nilaza ho tompon'antoka, na sarotra ho an'ny vondrona tahaka izany aza ny hilaza fa tompon'antoka any anaty gazety tadjik – tsy izy ireo no tena sary famantarana ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety. – mety ho mora ny mandefa imailaka any amin'ny BBC na Reuters.
Rosia: Mitady fialokalofana any Géorgie ilay [zazavao] voantso ho miaramila
01 Novambra 2020Finlandy
Ozbeky DJ, miezaka mamerina ny lazan'ireo mozika sôvietika fahiny
04 Oktobra 2020Armenia
Misy resaka anarana ihany koa no anton'ireo fifandirana iraisampirenena: Ny raharaha ao Nagorno-Karabakh
Febroary 2021 40 Lahatsoratra